>X X X X X X X | News, Art and Ideas For Burma
>X X X X X X X
Filed under: OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 4:13 pm
အဲဒီ အခါ ရှင်းနေသလိုနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မရှင်းတဲ့ အချက် တစ်ခုကို တွေ့တယ်။ ဘာ အချက်လဲ ဆိုတော့ … အခု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနာဂါတ် တိုင်းပြည်သည် စစ်အာဏာရှင် တိုင်းပြည် တစ်ခု မဟုတ်နိုင်ပါ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက သာ အာဏာ ရယူထားသော …. …..စစ်ခေါင်းဆောင် အာဏာရှင် …. တိုင်းပြည်ဖြစ်လာမှပါ။
ဒါတွေ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်ပါသလဲ … တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိ စိတ်ကြိုက် တပ်မတော်သား ၂၅ % ကို လွှတ်တော်သို့ စေလွှတ်နိုင်ပါသည် လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ထိုအချက်မှာ … တပ်မတော်သားများက ရွေးကောက်တင်မြောက်သော တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပဲ … ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကသာ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များသာ ဖြစ်နေသည်ကို သေချာ သတိထားမိမှ မြင်နိုင်ပါသည်။
ထိုအချက်ကြောင့် တပ်မတော် အတွင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ သြဇာအာဏာပိုကြီးထွားလာပြီး ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် သူ၏မိသားစု အာဏာကိုသာ ထူထောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ဘဲ … တပ်မတော်နှင့် တိုင်းပြည်သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အတွက် ဖြစ်နေပါသည်။
လက်တွေ့ မိုးထဲ၊ ရေထဲ၊ နေပူထဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခွင့်အရေး အပါအဝင် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းသူပြည်သားများအတွက် … တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်အတွက် … ဟု မှတ်တမ်းတင်မည်လော၊ …. တပ်မတော်နှင့် တိုင်းပြည်သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အတွက် …. ဟု မှတ်တမ်း တင်မည်လော ဆိုတာ …. လာမည့် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် တပ်မတော်သားများ ပေးမည့် မဲ များမှ အဆုံး အဖြတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။